1. Siza kujonga kuyo yonke imiba yezomthetho ojongayo. - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / benefits / 1. Siza kujonga kuyo yonke imiba yezomthetho ojongayo.
Inyathelo lokuqala esilithabathayo kukumamela ukuba zeziphi iinyaniso ezingqonge imeko yakho. Sifuna ukwazi yonke into eyenzekileyo, kwaye ufuna kwenzeke ntoni ngokulandelayo. Sifuna usixelele ngamazwi akho ngokwenzekileyo, kwaye ithini injongo yakho ngemeko yakho. Amaxesha amaninzi sinabaxumi abasematyaleni, abajongana nemicimbi abanqwenela ukuba bayiphephe kodwa kufuneka bayisombulule. Oko sikucebisayo kuxhomekeke kwinto abazame ngayo ngaphambili nakwinto abafuna ukuyenza kwikamva. Kwimeko yokuxelwa kwangaphambili, kukho izisombululo ezininzi ezinje ngokubekwa kwetyala kwindawo yaseburhulumenteni okanye yenkundla, ukuqeshisa ipropathi, ukuthengisa ipropathi ngokuthengisa okufutshane okanye ukuthengisa rhoqo, ukubhengezwa njengongenamali (nokuba nesahluko se-7, isahluko 13 okanye zombini lifune oko.) Ngaphandle kokuyiqonda kakuhle ibali lakho elipheleleyo, asinakuya kwindawo apho sithetha malunga nokukhetha.